Intralot nitatitra ny fahaverezana ho an'ny Q3 2015 na dia eo aza ny fitomboan'ny fandraisam-peo tombony lehibe sy EBITDA toy ny mpamatsy nijaly teo an-tanan ' ny malemy euro ary nitombo ny hetra vola. Tombony lehibe nitsangana ny 4% - taona-on-taona €59.6 m, raha EBITDA nohatsaraina 6% €44.7 m. Na izany aza "fifanakalozana fahasamihafana", indrindra indrindra mikasika ny mafy ny vahiny subsidiaries, nahita izany tatitra miasa soa talohan'ny hetra ny €372,000 ny fe-potoana, raha oharina amin'ny €7.1 m ho an'ny Q3 2014. Tena nitombo ny hetra amin'ny vola avy eo dia nitarika ho amin'ny fahaverezana ny €8.7 m, manaraka ny harato soa ny €2.9 m ho an'ny mitovy telovolana farany amin'ny taona texas holdem podzia puli. Ny vola miditra raiki-latsaky ny 1% - taona-on-taona €421.2 m.
Intralot CEO Antonios Kerastaris nanambara izy fa "sitraky" ny Q3 vokatra, izay "mifanaraka amin' ny fanantenana ho marin-toerana ny fitomboan'ny". Nanampy izy hoe: "EBITDA nitombo 6% na dia eo aza ny marary ny fampisehoana Italia noho ny faran'izay avo, firenena manokana, payouts, izay nitarika ny italiana raharaham-barotra anjara marginally ny EBITDA, ny malemy fampisehoana Azerbaijan, ny lavo-eny ny fifanekena anarana sy ny vokatry ny Amboara eran-Tany tamin'ny taon-dasa ao na ny faharoa sy ny fahatelo faritra." Mivaingana ny vola miditra mandritra ny sivy volana voalohany 2015 nohatsaraina 4% - taona-on-taona €1.4 bn, raha EBITDA raozy kely avy €131.7 m €131.9 m texas holdem poker 1001 spiele.
Tombony lehibe dia nidina 2% €189.7 m, raha miasa soa lavo 34% fotsiny fohy ny €18m texas holdem poker 2 android. Ny mafy ao fahaverezana ny €16.6 m, raha oharina amin'ny €3.3 m ho an'ny vanim-potoana iray ihany, ny taona 2014.
Net-trosa araka ny 30 septambra 2015 no €484.1 m, niakatra avy €381.4 m tamin'ny 31 desambra 2014. texas holdem poker 2 android download.
Sakafo toerana akaiky sokatra creek casino
Jeu casino gratuit free slots
Charlie gitto ny hollywood casino sakafo
Jeu casino gratuit milina iray sous
Rahoviana casino nisokatra indray amin'ny bc
Ny rakotra taratasy ho an'ny mpanara-maso casino